Faah-Faahinta Xogtii Ugu Dambaysay Ee Heshiiska Ay Chelsea Ku Doonayso Kai Havertz & Wakhtiga Ay Jawaab Cad Ka Helayso Thiago Silva - Gool24.Net
Faah-Faahinta Xogtii Ugu Dambaysay Ee Heshiiska Ay Chelsea Ku Doonayso Kai Havertz & Wakhtiga Ay Jawaab Cad Ka Helayso Thiago Silva
Kooxda Chelsea ayaa halkeeda kasii wada qorshayaasheeda suuqa kala iibsiga ee xagaagan iyadoo xiddigihii ugu dambeeyay ee sida xoogan loola xidhiidhinayaa ay yihiin Thiago Silva oo PSG ah, Benjamin Chilwell oo Leicester City ah iyo Kai Havertz oo Bayer Leverkusen ah.
Chelsea ayaa xilli horeba suuqa kala soo saxeexatay Timo Werner oo heshiis 53 Milyan oo euro ah ugaga soo biiray dhinaca RB Leipzig iyo Hakim Ziyech oo 40 Milyan oo euro ugaga yimid dhinaca Ajax.
Iyadoo xiddiga mudada ugu dheer lala xidhiidhinayay imaatinka Stamford Bridge uu ahaa Havertz ayay maalmihii ugu dambeeyay soo baxeen wararka sheegaya in Thiago Silva uu qaab bilaash ah ugu biiri karo kooxdaas si daafaceeda loogu xoojiyo.
Chelsea ayaa horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii hore laga dhaliyay 54 Premier League taas oo ka dhigaysa kuwo si ba’an ugu baahan inay xoojin ku sameeyaan dambeedkooda.
Thiago oo ah 35 sano jir ayaa Frank Lampard u noqon lahaa saxeex khibrad badan oo mudo gaaban caawin lahaa iyadoo la sheegayo in Blues ay wada xaajood la bilaabeen wakiiladiisa.
Haddaba, sida uu sheegayo khabiirka suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano oo ah mid xogtiisa aad loogu kalsoon yahay Chelsea ayaa go’aanka kama dambaysta ah ee Thiago Silva heli doonta maalmaha soo socda.
Thiago Silva ayaa hadda diiradiisa oo dhan saaraya Final-ka Champions League ee ay caawa la yeelan doonaan dhigooda Bayern Munich isaga oo intaas kaddib war cad siin doona Blues.
Fabrizio Romano ayaa sidoo kale sheegaya in Chelsea ay dalab cusub ka gudbisay Havertz oo ay sii wadaan wada xaajoodka ay kula jiraan kooxdiisa.